Iwo mana masitayipi ematanda akasimba ezvigaro zvemaoko anozivikanwa seyakanakisa fenicha munyika-Alice fekitori
Vagadziri vanopa emhando yepamusoro label nameplates OEM masevhisi
Metal Bhodhoro Label
Iyo armcheya chigaro chine hunhu hwakasiyana hwerudzi rweChinese, uye inozivikanwa zvakare seyakanakisa fenicha pasirese.
Kukurudzira maitiro akareruka, pasina kushongedzwa, teerera kune kunaka kwechinhu, kushandiswa kwakakwana kwehuni pachayo uye magadzirirwo pasina kuvhara, uye kushandiswa kwerunako rwezvinhu zvakasiyana nekugadzirwa kwezvinhu kuratidza fenicha yehuni pachayo uye yakasikwa uye yakapusa. maitiro.
Nyatsoteerera kushanduka kwemhando yemutsara, zvichiita kuti mutsauko pakati pemitsara yakatwasuka uye ma curves, sikweya uye denderedzwa siyana, yakatwasuka uye yakatwasuka misiyano, ine runako rwakasimba rwechimiro. Akanaka pakuva ane nyasha uye anoyevedza, uye anokunda nekunyomba kwakanatswa.
Kuimba ndiyo icing pakike, chaiyo uye yakarurama, kunyatsoverenga kuverenga, uye kutarisa kukuru kune kunaka kwechimiro. Iyo tenon uye tenon chimiro chinoshandiswa, uye kune akawanda marudzi etenon uye anochinjika kune akasiyana zvimiro, izvo zvisingaite chete zvinosangana nezvinodiwa zvinoshanda uye mechanical chimiro, asi zvakare inoita kuti igadzikane, inoyevedza uye yakasimba.
Teerera kune runako rwehunyanzvi, chimiro chakanaka, chitarisiko chakanatswa, uye kusagadzikana uye kunetsa. Teerera kugadziriso yepasi uye shandisa iyo yechinyakare Chinese kuvaka kweiyo furemu chimiro. Chimiro chekunze cheskweya tsoka chakafanana nembiru, uye chinochinjika chakaita sedanda. Shanduko dzakakodzera, zvichikonzera chimiro-chakatarisana uye chitarisiko-chakatarisana, izvo zvinoita kuti Ming-style armchair itore Chitarisiko chiri nyore uye chinokwevera, chine simba uye chakasimba, chakapfava uye chakanaka muhunyanzvi.
Heino zivisa: Zviri pamusoro apa zvinobva paInternet, uye zvirimo ndezvenyu chete. Kana iwe ukatyora kodzero dzako, ndapota taura nesu uye isu tinoidzima nekukasira.
Alice ibhizinesi rinogadzira mazita emazita. Kubva payakavambwa muna 1998, yanga yakazvipira kugadzira marudzi ese emazita emazita. Nemhando yepamusoro, sevhisi ine hanya, uye kutendeseka kwakanaka, inopa vatengi huwandu hwakazara hweakagadziridzwa masaini masevhisi.
ZVAKAITIKA Ndeapi matambudziko anofanirwa kutariswa kana uchidhinda self-adhesive labels-Alice fekitori
Mazano ekuchengetedza matanda akasimba matafura uye zvigaro-Alice fekitari ZVINOTEVERA